Raha ny tatitra nentin’ireo nanatri-maso ny loza dia itony moto scooter itony no nifandona tamin’ny fiara mini-bus Mazda, izay voalaza fa samy nandeha mafy. Fantatra moa fa hianatsimo ilay fiara raha toa ka hianavaratra ilay moto izay nanao taingin-telo, izay mpianaka avokoa izy 3 lahy nitaingina azy. Nifanatrika ny fifandonana ka goavana ny fahavoazana satria vokatry ny dona mafy nahazo ireo olon-dehibe roa dia tsy tana ny ain’izy roa rehefa tonga teny amin’ny hopitaly. Ilay zazalahy kely iray kosa dia fahatapahana teo amin’ny tongony no nahazo azy. Tsy nisy naninona kosa ireo tao anatin’ilay fiara mazda fa ny fiara no nisy fahavoazana goavana vokatry ny dona nahazo azy. Nentim-pahatairana ny vadin’ilay rangahy mpamily fiara ka torana tsy nahatsiaro tena ka mbola arahi-maso eny amin’ny Hopitaly atsimo tamin’ny fotoana nanoratana ity vaovao ity. Anisan’ny fitaovana iray hitrangana lozam-pifamoivoizana matetika tao ato ny moto scooter ka ilàna fitandremana tanteraka ny fifanenana amin’izy ireo.